Tilmaamaha Ilaha Marinada Dugsiga Dhexe ee Dugsiyada Dowliga ah ee Boston Helaha Dugsiyada Boston
Tilmaamaha Ilaha Marinada Dugsiga Dhexe ee Dugsiyada Dowliga ah ee Boston
Liiskaan oo ah Google Map halkaan ka fiiri.
Booqo Xogteena Buuxda ee Qalabka Diiwaangelinta Dugsiga ee Qoysaska
Waa maxay Maritaanada Dugsiga Dhexe?
Ardayda dhigata barnaamijyada waxbarashada guud, dugsi kasta oo hoose oo katirsan BPS waxa uu ku xiran yahay dugsi dhexe ama dugsi K-8. Dugsiga noocaan ah waxaa loo yaqaan dugsi “pathway” ah. Waxaa jira hal dugsi sare oo loo gudbo Lyon High School waa dugsi loo gudbo oo loo damaanad qaaday ardayda dhigata Lyon K-8 School.
Ma in canuggaygu aado marinadiisa ama marinkeeda dugsigaa?
Ardaya loogama baahna in ay aadaan marinka dugsigooda dhexe. Si kastaba ha ahaatee, marinada dugsiga dhexe waxay ardayda dugsiga hoose siiyaan boos damaanad qaadan oo ay ka helaan dugsiga dhexe.
Sideen isaga diiwaan galiyaa marinkayga dugsiga?
Janaayo sanadkasta, ardayda dugsiga hoose ee kujira fasalka ay uga baxayaan (fasalka ugu danbeeya ee ay tagi dugsigooda hadda ay dhigtaan) waxay heli doonaan warqad u caddaynaysa marinka dugsigooda dhexe. Qoysasku waxay haystaan laba doorasho marka ay halkaan marayaan.
Haddii aad rabto in canuggaagu xaadiro marinka dugsiga lagu qoray: waxba ma samaynaysid . Canuggaaga si iskiis ah ayaa loogu qorayaa loogana diiwaan galinayaa marinka dugsigiisa.
Haddii aad doonayso in ardaygaagu ku biiro dugsi kale oo BPS ah: waxaa kugu waajib ah in aad la xiriirto Adeegga Soo dhaweynta aadna ka qaybqaadato hanaanka is diiwaan galinta si aad u doorato dugsi BPS ah oo cusubo.
Sanad Dugsiyeedka Balaarinta Fasalada 2022-2023 6aad
BPS waxay sheegtay in dugsiyada soo socda lagu dari doono fasalka 6aad marka la gaaro 2022-23:
Dugsiyada K-5 ee soo socda ma haystaan marin la damaanad qaaday oo lagu tagayo fasalka 6 marka la joogo 2022-2023:
Wax ka badalada BPS waa soo socdaan. Wac lambarka diiwaangalinta BPS si aad u hesho macluumaad dheeraad ah (617) 635-9046.
Haddii canuggaagu ku jiro fasalka 5aad ee dugsiga balaarinta fasalka 6aad:
Canuggaagu wuxuu kusii jiri karaa dugsigiisa ee loogu tala galay 6aad sanadka soo socda. Wax ka weydii dugsiga canuggaaga sida aad u jeceshahay in dookhaagu sii jiro.
Haddii canuggaagu kujiro dugsiga aan lahayn balaarinta fasalka ee K-5 ee fasalka 6aad:
Waxaad kala xulan kartaa dugsiyada balaarinta fasalka 6aad ee kujira liiska xulashada dugsiga BPS, laakiin faham kuraastaas ma ahan kuwo la damaanad qaaday. Boston School Finder wuxuu qoysaska kula talinayaa in ay kala xushaan fasalo dheeraad ah 6 (iyo kasii badan) kuwaas oo loogu tala galay canuggaaga sanadka soo socda. Waxaad ka daalacan kartaa xulashooyinka fasalka 6aad halkaan adiga oo adeegsanaya School Finder Tool.
Liiska Marinada Dugsiga Dhexe ee Sanad Dugsiyeedka 2022-2023
Dugsiga soo Diraya Fasalka Looga baxayo Dugsiga U gudbidda ee la Damaanad qaaday
Dugsiga Hoose ee Mason 5 Dearborn 6-12 STEM Academy
Baldwin Early Learning Pilot Academy 1 Dugsiga Edison K-8
Mather Elementary 5 Dugsiga Dhexe ee Frederick Pilot
UP Academy Holland 5 Dugsiga Dhexe ee Frederick Pilot
Lyon K-8 School 8 Dugsiga Sare ee Lyon
Quincy Elementary 5 Dugsiga Sare ee Quincy
Lee Academy 3 Dugsiga Young Achievers K-8
Khariidadda Pathways ee Dugsiga Dhexe